I-DA izobabela enkantolo ngokuqokwa kabusha kukaDudu Myeni | News24
I-DA izobabela enkantolo ngokuqokwa kabusha kukaDudu Myeni
Cape Town – Kumele asususwe esikhundleni sakhe sokuba ngusihlalo weSouth African Airways (SAA) uDudu Myeni kulandela ukuqokwa kwakhe kabusha kulesi sikhundla, kusho iDemocratic Alliance (DA) ngeSonto, ikahlala ngokuthi iSAA ibhekane nezinkinga kakhulu ngesikhathi ekulesi sikhundla phambilini.
I-DA izofuna inkantolo kube iyona egudluza uMyeni.
UMyeni ukuqokwa kwakhe kabusha kuqinisekiswe ngoLwesihlanu njengoba ezophinde ahlale omunye unyaka.
UJames Selfe weDA ukholelwa ukuthi isimemezelo esenziwe yiKhabhinethi singukubukela phansi abantu abafanelwe yilo msebenzi, abangakwazi ukuwenza kangcono.
Ngesikhathi uMyeni ekulesi sikhundla wehluleke kwaze kwakabili iminyaka ilandelana ukushicilela umbiko wezimali ze-SAA, le nkampani yaphinde yalahlekelwa yimali engaphezulu kuka-R4bn ngonyaka, ngokusho kwesitatimende seDA.